မိတျကပျပညာလေးနဲ့ စားဝတျနရေေးအတှကျ ရှာဖှစေားသောကျရတာကို တောမခိုလို့ အပွဈမွငျနကွေတဲ့ အပျေါ ပေါကျကှဲနတေဲ့ မထကျ – Shwe Likes
မိတျကပျပညာလေးနဲ့ စားဝတျနရေေးအတှကျ ရှာဖှစေားသောကျရတာကို တောမခိုလို့ အပွဈမွငျနကွေတဲ့ အပျေါ ပေါကျကှဲနတေဲ့ မထကျ
နာမညျကွီး မိတျကပျပ ညာရှငျတဈ ဦးဖွဈတဲ့ မထ ကျကတော့ ကိုယျပို ငျအရညျအခြ ငျးတှနေဲ့ အောငျမွငျ စှာလြှောကျလှမျးနေ တာပဲ ဖွဈပါ တယျ။ မထကျက အလှဖနျ တီးရှငျအဖွဈ ပရိသ တျအခဈြတျော အနုပညာရှ ငျမြားစှာကို ပွငျဆ ငျခွယျသပေးေ နရသလို ကိုယျပို ငျအလှပွငျ သငျတနျးကို လညျး ဖှ ငျ့လှဈထားတာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မထကျက သရုပျဆောငျပို ငျးကို ဝါသနာပါ သူလေးဖွဈ တာကွောငျ့ ဇာတျကားေ တှလ ကျခံရိုကျကူးခဲ့တာ လညျး ဖွဈပါတယျ။
မထကျဟာ အရေးေ တျာပွုံ ကီးအောငျမွငျရေးမှာ တကျတကျွ ကှကွှပါဝငျခဲ့ တာကွောငျ့ ၅၀၅(က)နဲ့ဝရ မျးထုတျခံခဲ့ရပွီး တိမျးရှော ငျနခေဲ့ရ တာဖွဈပါတယျ ။ ပရိသတျတှေ ကလညျး ပွညျသူတှဘေ ကျကနေ တဈသှေးတညျး တဈသားတညျး ရပျတညျေ ပးခဲ့တဲ့ မထကျအတှကျ ဂုဏျယူနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
မထကျက စားဝတျေ နရေးအတှကျ မိတျက ပျပညာလေး နဲ့ ရှာဖှစေားေ သာကျရတာ ကို တောထဲ မခိုလို့ အပွဈမွငျနကွေလို့ စိတျမကော ငျးဖွဈေ နတာကို သူမရဲ့ လူ မှုကှနျယ ကျကနေ ရငျဖှငျ့ပွော ပလာတာ ဖွဈပါတယျ။ “ငါတို့က အလှူခံစားရမှာလား… အလုပျလုပျ မှ အကုနျနောကျ ကလူတှအေဆ ငျပွမှောလေ… အလုပျအေ ကွာငျးတငျမှ အလုပျ လုပျရတာလေ… ငါဘာမှ မတငျဘဲ ဘယျသူမှငါ့ကို လာအလုပျ မပေးဘူးနျော… ငါတို့က သူမြားအလုပျ ဝငျလုပျရတာ မှာဟုတျဘူး… ငါတို့ကိုယျတိုငျ အလုပျရှာ လုပျရတာ… အလုပျကိုယျ့ဆီ လာဖို့ ဖိတျချေါနရေတာ… ကိုယျရှာမှရတာကို ကနျြတဲ့သူတှေ ကိုဝရေမြှရတာ… ဘယျသူမှတ ငျမကြှေးထားဘူး
နိုငျငံရေးေ မ့ထားပွီး ပြျောနတေဲ့ သူထဲလညျး ငါတို့မပါဘူး… မွို့ပျေါေ နတာခငျြးအတူတူ သူတို့ကဘဲနို ငျငံကယျတငျနေ တယျအခြိုး မြိုးနဲ့… ငါတို့အလု ပျလုပျတဲ့သူ အလုပျအကွော ငျးတငျတဲ့ သူကဘဲ နိုငျငံ့သစ်စာေ ဖာကျလို ပတျရမျးနပွေီွးေ ပာနတေယျ… မိတျကပျ ဆရာက မိတျကပျလိ မျးမှငှဝေ ငျတာလေ… ပှဲရာသီ ဒီအခြိနျ ဘဲအလု ပျလုပျငှစေု …. ပှဲရာသီကုနျရငျ အကုနျ ရှိတာထိုငျ စားရတာ ထုံးစံလေ အဲ့တာေ ရှးကတညျးက
မင်ျဂလာေ ဆာငျကွလို့ လာအပျ လို့လိမျး တာလေ အလုပျလု ပျတာလေ… အဲ့လို့အလုပျလာ အပျအောငျ လညျး ကိုယျအလုပျ လုပျကွောငျးတငျ ရတာလေ… မိတျကပျဆ ရာမှာ မဦေးတော ထဲရောကျသှား တယျ လေးစားတယျ ကိုယျလညျးသူ့ လိုသတ်တိမရှိ ဘူး မစှနျ့စားရဲဘူး… အဲ့ တာအမှနျဘဲ…. ကိုယျ့မွို့ ကိုယျ ရှာမှာနနေကွေ အလုပျလုပျကိုငျ စားနကွေတဲ့ မိတျကပျဆရာတှကေ နိုငျငံ့သစ်စာဖောကျေ တှဖွဈသှားရောလား…..
မဦေးလိုတော ထဲသှား မစှနျ့လှ တျရဲတဲ့ မိတျကပျဆ ရာတှကေ အလုပျမလု ပျဘဲ မဦေးကိုအားနာငဲ့ညာ လေးစားသဖွငျ့ အိမျမှာ ထိုငျနရေမှာလား ငါတို့ထမ ငျးရှာစားတဲ့အလု ပျကိုစှနျ့လှတျေ ပးရမှာလား… ငါတို့က company ဝနျထ မျးမှဟုတျဘူး တနှဈပတျလုံးအလု ပျမလု ပျရဘူး work for home လုပျလို့ မရဘူး တနှဈမှာ ၄လ ၅လဘဲ ပှဲရာသီ ခြိနျအလုပျလုပျရ တာ… အဲ့လတှေ ကုနျရငျ မိတျကပျဆ ရာတိုငျး အလုပျမရှိ ငုတျတုတျေ နရတာ ရှာထား သမြှ ထိုငျသုံးရတာ… အားYar ပွီး လကျအားတို ငျးရေးမနနေဲ့ ကိုယျကိုတို ငျ တောထဲရော ကျနပွေီလား ဘာတှမှောပါ ဝငျနပွေီလွဲ ပနျကွညျ့အုံး
တောထဲကသူ ကကိုယျေ တှကိုလိုကျမ တှကျကပျဘူး(မဦေး လညျးသူ အဆငျပွတေဲ့နရော မှာသူကနျြးမာစှာ အန်တာရယျ ကငျးစှာရှိနေေ သးတာ သူနဲ့နီးစပျရာ အသိုငျးအဝိုငျးက ကွားသိထား ပါတယျ)…. မွို့ပျေါနသေူအ ခငျြးခငျြး လိုကျက ပျသပျပွောနတော… ဘယျလို အတှေးအေ ချါလညျး စဉျစားမရဘူး… အားနေ မဦေး သနား ပါတယျ မဦေးကိုအား မနာဘူးလား… ပွောပွောေ နကွတာ ငါတို့ကို ဘဲမမေးနဲ့ ကိုယျ့ ကိုကိုယျလညျး ပွနျမေးကွအုံး” ဆိုပွီး ရေးသားထားတာ ပဲဖွဈပါတယျ။
နာမည်ကြီး မိတ်ကပ်ပ ညာရှင်တစ် ဦးဖြစ်တဲ့ မထ က်ကတော့ ကိုယ်ပို င်အရည်အချ င်းတွေနဲ့ အောင်မြင် စွာလျှောက်လှမ်းနေ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ မထက်က အလှဖန် တီးရှင်အဖြစ် ပရိသ တ်အချစ်တော် အနုပညာရှ င်များစွာကို ပြင်ဆ င်ခြယ်သပေးေ နရသလို ကိုယ်ပို င်အလှပြင် သင်တန်းကို လည်း ဖွ င့်လှစ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မထက်က သရုပ်ဆောင်ပို င်းကို ဝါသနာပါ သူလေးဖြစ် တာကြောင့် ဇာတ်ကားေ တွလ က်ခံရိုက်ကူးခဲ့တာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မထက်ဟာ အရေးေ တ်ာပြုံ ကီးအောင်မြင်ရေးမှာ တက်တက်ြ ကွကြွပါဝင်ခဲ့ တာကြောင့် ၅၀၅(က)နဲ့ဝရ မ်းထုတ်ခံခဲ့ရပြီး တိမ်းရှော င်နေခဲ့ရ တာဖြစ်ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေ ကလည်း ပြည်သူတွေဘ က်ကနေ တစ်သွေးတည်း တစ်သားတည်း ရပ်တည်ေ ပးခဲ့တဲ့ မထက်အတွက် ဂုဏ်ယူနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မထက်က စားဝတ်ေ နရေးအတွက် မိတ်က ပ်ပညာလေး နဲ့ ရှာဖွေစားေ သာက်ရတာ ကို တောထဲ မခိုလို့ အပြစ်မြင်နေကြလို့ စိတ်မကော င်းဖြစ်ေ နတာကို သူမရဲ့ လူ မှုကွန်ယ က်ကနေ ရင်ဖွင့်ပြော ပလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ငါတို့က အလှူခံစားရမှာလား… အလုပ်လုပ် မှ အကုန်နောက် ကလူတွေအဆ င်ပြေမှာလေ… အလုပ်အေ ကြာင်းတင်မှ အလုပ် လုပ်ရတာလေ… ငါဘာမှ မတင်ဘဲ ဘယ်သူမှငါ့ကို လာအလုပ် မပေးဘူးနော်… ငါတို့က သူများအလုပ် ဝင်လုပ်ရတာ မှာဟုတ်ဘူး… ငါတို့ကိုယ်တိုင် အလုပ်ရှာ လုပ်ရတာ… အလုပ်ကိုယ့်ဆီ လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်နေရတာ… ကိုယ်ရှာမှရတာကို ကျန်တဲ့သူတွေ ကိုဝေရမျှရတာ… ဘယ်သူမှတ င်မကျွေးထားဘူး
နိုင်ငံရေးေ မ့ထားပြီး ပျော်နေတဲ့ သူထဲလည်း ငါတို့မပါဘူး… မြို့ပေါ်ေ နတာချင်းအတူတူ သူတို့ကဘဲနို င်ငံကယ်တင်နေ တယ်အချိုး မျိုးနဲ့… ငါတို့အလု ပ်လုပ်တဲ့သူ အလုပ်အကြော င်းတင်တဲ့ သူကဘဲ နိုင်ငံ့သစ္စာေ ဖာက်လို ပတ်ရမ်းနေပြီြးေ ပာနေတယ်… မိတ်ကပ် ဆရာက မိတ်ကပ်လိ မ်းမှငွေဝ င်တာလေ… ပွဲရာသီ ဒီအချိန် ဘဲအလု ပ်လုပ်ငွေစု …. ပွဲရာသီကုန်ရင် အကုန် ရှိတာထိုင် စားရတာ ထုံးစံလေ အဲ့တာေ ရှးကတည်းက
မင်္ဂလာေ ဆာင်ကြလို့ လာအပ် လို့လိမ်း တာလေ အလုပ်လု ပ်တာလေ… အဲ့လို့အလုပ်လာ အပ်အောင် လည်း ကိုယ်အလုပ် လုပ်ကြောင်းတင် ရတာလေ… မိတ်ကပ်ဆ ရာမှာ မေဦးတော ထဲရောက်သွား တယ် လေးစားတယ် ကိုယ်လည်းသူ့ လိုသတ္တိမရှိ ဘူး မစွန့်စားရဲဘူး… အဲ့ တာအမှန်ဘဲ…. ကိုယ့်မြို့ ကိုယ် ရွာမှာနေနေကြ အလုပ်လုပ်ကိုင် စားနေကြတဲ့ မိတ်ကပ်ဆရာတွေက နိုင်ငံ့သစ္စာဖောက်ေ တွဖြစ်သွားရောလား…..
မေဦးလိုတော ထဲသွား မစွန့်လွှ တ်ရဲတဲ့ မိတ်ကပ်ဆ ရာတွေက အလုပ်မလု ပ်ဘဲ မေဦးကိုအားနာငဲ့ညာ လေးစားသဖြင့် အိမ်မှာ ထိုင်နေရမှာလား ငါတို့ထမ င်းရှာစားတဲ့အလု ပ်ကိုစွန့်လွှတ်ေ ပးရမှာလား… ငါတို့က company ဝန်ထ မ်းမှဟုတ်ဘူး တနှစ်ပတ်လုံးအလု ပ်မလု ပ်ရဘူး work for home လုပ်လို့ မရဘူး တနှစ်မှာ ၄လ ၅လဘဲ ပွဲရာသီ ချိန်အလုပ်လုပ်ရ တာ… အဲ့လတွေ ကုန်ရင် မိတ်ကပ်ဆ ရာတိုင်း အလုပ်မရှိ ငုတ်တုတ်ေ နရတာ ရှာထား သမျှ ထိုင်သုံးရတာ… အားYar ပြီး လက်အားတို င်းရေးမနေနဲ့ ကိုယ်ကိုတို င် တောထဲရော က်နေပြီလား ဘာတွေမှာပါ ဝင်နေပြီလြဲ ပန်ကြည့်အုံး
တောထဲကသူ ကကိုယ်ေ တွကိုလိုက်မ တွက်ကပ်ဘူး(မေဦး လည်းသူ အဆင်ပြေတဲ့နေရာ မှာသူကျန်းမာစွာ အန္တာရယ် ကင်းစွာရှိနေေ သးတာ သူနဲ့နီးစပ်ရာ အသိုင်းအဝိုင်းက ကြားသိထား ပါတယ်)…. မြို့ပေါ်နေသူအ ချင်းချင်း လိုက်က ပ်သပ်ပြောနေတာ… ဘယ်လို အတွေးအေ ခ်ါလည်း စဉ်စားမရဘူး… အားနေ မေဦး သနား ပါတယ် မေဦးကိုအား မနာဘူးလား… ပြောပြောေ နကြတာ ငါတို့ကို ဘဲမမေးနဲ့ ကိုယ့် ကိုကိုယ်လည်း ပြန်မေးကြအုံး” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကောငျးကငျ အမွငျ့ပေ (၅၀) လောကျမှာ လယောဉျ စကျခြို့ယှငျးမှု နဲ့ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ အောငျမငျးခနျ့နဲ့ စဈသှေး